Izimpawu ezingamashumi amabili
Uhlelo lokuhweba max rar
Izimpawu ezingamashumi amabili - Ezingamashumi izimpawu
Ukuhlola okumiselwe imigomo : Ithaski 1 Ukubhala ngesandla: · ubamba ipensela nekhrayoni ngokuyikho, · wakha okungenani izinhlamvu ezincane ezingamashumi amabili, ngobukhulu kanye nendawo. 4 Kukhona izihlalo zobukhosi ezingamashumi amabili nane zizungeze isihlalo sobukhosi, futhi kulezi zihlalo zobukhosi+ ngabona kuhlezi abadala+ abangamashumi amabili nane+ begqoke izingubo zangaphandle ezimhlophe, + emakhanda abo kunemiqhele yegolide.
4 Nesihlalo sobukhosi sasihaqiwe yizihlalo zobukhosi ezingamashumi amabili nane, naphezu kwezihlalo zobukhosi. Zonke izimpawu zomnyama, futhi kwahlakaza zonke i.
IYAKUQAPHELA ukuthi izinhlobo ezilinganiselwa ezingxenyeni ezingamashumi amabili ekhulwini zezilwane zisengozini yokushabalala emhlabeni nokuthi kuyothi kuba ngunyak ak- 2100, izinga lokushisa liyobe selikhuphuke ngendlela esabekayo ezindaweni ezinokuphakama okulingana nokolwandle;. Kodwa isimo sezulu sendawo.
” Ngase ngithi,. 4 Ngathi “ Amashumi amabili- nesithupha.
Kwakukhona izinkulungwane ezingamashumi amathathu. Kusuka la kwaqala isixakaxaka semisebe yezokuxhumana sinabele ezweni lonke okwahamba kwagcina sekunezindawo ezinophawu lwezindawo eziphakeme eziyizi nkulungwane ezingamashumi amabili nesishiyagalolunye nezibonakalayo ezintabeni nasezakhiweni eziphakeme nasogcinweni lwamanzi olusezindaweni eziphakeme.
Bheka, isihlalo sobukhosi sasimi ezulwini nohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi; 3 nohleziyo wayefana netshe lejaspi nesardiyu ukubukeka kwakhe, nothingo lwenkosikazi luhaqe isihlalo sobukhosi lufana nesimaragidu ukubukeka kwalo. + 5 Esihlalweni sobukhosi kuphuma imibani, + namazwi, nokuduma kwezulu; + kukhona izibani+ zomlilo.
USanele wahlinzwa izikhathi ezingamashumi amabili nanhlanu ezinyangeni ezintathu esesibhedlela, futhi abasebenzi basesibhedlela bazikhandla befuna ukuqinisekisa “ Kwakungathi ngiyaphupha. Lokhu kusho ukuthi uqalisa futhi aqedele endaweni efanele.
IziMpawu ezine zokuqala ziyavulwa, ngabagibeli bamahashi. Njengesisebenzisa igunya laso “ izinyanga ezingamashumi amane nambili, ” noma iminyaka emithathu nenxenye, isiprofetho mbumbulu sokufanisa iminyaka emithathu nenxenye yokusebenza kukaKristu, uma usebenzisa isimiso sosuku wunyaka. Uma izimpawu zikhona zivamise ukubonakala kuze kuphele amasonto ayisishiyagalombili kanti kungabandakanya lezi: ukucanuzelelwa yinhliziyo, ukuphalaza, ukukhishwa yisisu, isikhumba esiphuzi, umkhuhlane, kanye nokuphathwa yiqolo. Izimpawu ezingamashumi amabili.
Kwakuyizinkonzo ezingamashumi amabili- nesikhombisa, ngaphandle kokusha izwi.
Abadayisi be forex abasithatha amaklayenti